Ahoana no hilazana raha misy ankizivavy tia anao - Famantarana mazava 25 Manana ny fahatsapany ho anao - Fifandraisana
Ahoana ny fomba hilazana raha misy ankizivavy tianao: famantarana mazava 25 izy
Tiany ve aho?
Fanontaniana iray izay tsy isalasalana fa niditra an-tsain'ny sain'ny olona rehetra tamin'ny fotoana iray tamin'ny fiainany.
Rehefa dinihina tokoa, inona no fomba tsara kokoa hisorohana ny fandavana noho ny famaritana ny zavatra tsapan'ny tovovavy alohan'ny hanondroana ny fahaliananao am-pitiavana?
Na izany aza, ny vehivavy indraindray dia mety ho sarotra be ny mamantatra, na dia mieritreritra aza isika fa manao zavatra miharihary amin'ny bandy alehantsika.
Ary ndao ho marin-toetra, ianareo lehilahy dia tsy dia mahay mamaky ireo famantarana matetika.
Indrindra fa rehefa ny rahonao dia manjavozavo amin'ny fo kely milomano eo imasonao rehefa mijery olona tena tianao ianao.
Na tianao izy ary tsy azonao antoka raha hiteny izy raha nanontany azy ianao, na efa nivoaka ianao, saingy tsy azonao antoka raha te hitondra zavatra izy, ny famakiana zazavavy dia mety ho kely an'ny toeram-pitrandrahana harena ankibon'ny tany.
ahoana ny fijanonana tsy hianjera amin'olona iray
Ny lakileny dia ny hijerena fihetsika manokana sy fika hafa izay manondro ny fifandraisany eo aminao.
Ny sasany mety ho saro-pantarina, ny hafa kosa mifikitra amin'ny filalaovana fitia, saingy ireto misy famantarana milaza fa tonga ao aminao izy.
1. Misambotra azy mijery anao izy
Rehefa tia bandy iray isika dia hiafara mijery azy be dia be na tiantsika na tsia, ary mety tsy ho mahay manafina izany isika. Raha mijery azy ianao ka tratranao mibanjina azy dia famantarana tsara izany.
Raha mitsiky aminao izy rehefa mihaona ny masonao, na raha mamaly ny tsikinao amin'ny fitsikiana anao izy dia tsara kokoa izany. Indrindra raha ny iray amin'ireo tsiky mamy sy saro-kenatra tonga rehefa tratra mitazana ianao.
Rehefa dinihina tokoa, dia sarotra ny manafina ny tena fahatsapanao amin'ny fotoana tsy anomanana anao izany.
Etsy ankilany, ary satria tsy misy na inona na inona isika raha tsy mifanohitra, famantarana iray hafa (indrindra raha mbola tsy nisy zavatra teo anelanelanao) dia tsy mijery anao ara-bakiteny mihitsy izy.
Hodorany amin-jotom-po ny fijerinao satria tsy te ho miharihary loatra izy.
2. Ary mitady anao izy
Raha miditra ao amin'ny efitrano iray izy ary mahafantatra fa ho eo ianao, jereo raha mijery anao ny masony rehefa tonga izy.
Na dia tsy manatona anao aza izy ary mankany amin'ny namany fa tsy, ny zava-misy dia manamarina izy raha misy ianao dia marika tsara tokoa, satria midika izany fa tao an-tsainao ianao.
Ireo fahitana kely ireo dia manamarika fa manomana ny tenany ara-tsaina izy amin'ny fifandraisana aminao rehefa avy eo.
3. Manomboka mitsabo anao amin'ny fomba hafa izy
Raha fantatrao vetivety amin'ny maha-mpinamana anao izy ary nanjary tsapany tampoka ny fahatsapanao anao dia tokony ho mpilalao tsy mampino izy hampijanona ny fihetsiny aminao tsy hiova.
Raha nanana akaiky ianao, fifandraisana feno fitiavana taloha ary tampoka izy nijanona tsy mikasika anao na manomboka tsy mitovy aminao amin'ny fomba fanaovany bandy hafa fantatrao, mety misy zavatra.
Mety tsy hahatsapa ho mahazo aina intsony izy amin'ny maha-sariaka azy satria ao am-pony no tadiaviny bebe kokoa.
Mety te ho sakaizanao izy, saingy misy vintana lehibe koa izy manahy ny handavana azy na hanimba ny finamanana tsara tanteraka.
4. Mamaly ny hafatrao izy
Averina indray, hiovaova arakaraka ny zazavavy amin'ny zazavavy ity, fa amin'ny ankapobeny, raha misy olona tianay, dia halefanay haingana haingana izy ireo.
Raha tsy efa tafiditra amin'ilay 'lalao' natahorana hamaly ianao rehefa afaka telo andro ary mody tsy mahaliana, amin'izay dia hifikitra amin'izany izy satria ny ankamaroan'ny ankizivavy dia tsy te ho toa ilay 'mazoto'.
Na dia miroborobo aza ireo olona sasany amin'ireto lalao ireto dia tsy manam-potoana ho azy ireo ny ankamaroan'ny tovovavy. Raha manohy milalao ianao dia mety ho tsy dia liana vetivety intsony izy, noho izany ny fitiavana andriamanitra ajanony ny fikorontananana ary andefaso hafatra aminy.
5. Toa matahotra izy
Rehefa mifankahita aloha dia mifatotra kely amin'ny lela ve? Sahirana ve izy hiresaka lohahevitra ifampiresahana?
Tsy azony antoka ve ny fomba hiarahaba anao? Tokony ho fifandraisan-tanana ve? Famihinana? Oroka eo amin'ny takolaka? Oroka amin'ny takolaka roa tonta? Sa mijoretra fotsiny eo?
Raha tia anao ny vehivavy dia hanana lolo ao an-kibony izy rehefa hitany ianao, ary mety hidika izany fa manao fialantsasatra fohy ny ati-dohany.
Tsy ela dia tokony hiala sasatra ao amin'ny orinasanao izy, fa ny nerveau voalohany dia marika azo antoka fa liana izy.
6. Touchy-feely izy
Ny tovovavy sasany dia tsy mahazo aina amin'ny fifandraisana imasom-bahoaka, noho izany tsy mihatra foana izany, fa amin'ny ankapobeny, raha ao aminao izy dia hahita fomba hikasihana anao izy, na dia fihetsika kely fotsiny aza izany.
Ny mikasika ny sandrinao dia azo antoka fa famantarana tsara, satria fanahy iniana sy mahagaga izany. Na mety milalao fomba ara-batana hafa toy ny famelezana lalao anao izy na ny fitarihana mivantana kokoa aza raha matoky tena sy manintona anao izy.
7. Manao drafitra izy
Tsy misy zavatra mahatezitra kokoa noho ny misaraka amin'ny bandy tianao toa tsy misy hevitra mazava rehefa mifankahita manaraka.
Raha tsy manahirana azy ny mahita anao indray izy dia mety hitazona manjavozavo ny raharaha, fa raha liana aminao izy, dia mety hanolotra andro na fotoana sasantsasany izy afaka amin'ny daty hafa.
Hamarino tsara fa alainao amin'ny iray amin'izy ireo izy raha afaka ary manoritra drafitra iray, na mety hieritreritra izy fa tsy liana intsony ny hihaona indray ary miala vay.
Ny fametrahana drafitra dia manome azy toky fa hahita anao indray izy, ary midika izany fa tsy mila miandry anao izy hanome sosokevitra iray, izay mety hahasosotra be.
8. Tsy mitovy ny fihetsiky ny sakaizany
Raha tiany ianao, dia mety ho fantatry ny sakaizany daholo izany ary hihetsika amin'ny fomba taratra izany.
Angamba avelan'izy roa irery ianao rehefa manatona azy ianao na mety milatsaka fambara kely izy ireo rehefa miresaka aminao.
Na izany na tsy izany, ny namana dia matetika tsy dia madinidinika momba ny zavatra ka manome azy ireo famantarana tsara momba ny fihetseham-pon'ilay zazavavy tenany.
zava-misy mahafinaritra hizara momba anao
Mety hilaza aminao mivantana mihitsy aza izy ireo fa tiany ianao - raha tsara vintana ianao!
9. Mihomehy Izy ary mitsiky
Raha fantatrao fa ratsy ny vazivazinao ary mbola ihomehezany izy ireo, dia famantarana tsara izany fa lasa tia anao izy.
Ny fiarahana amin'ny tovolahy tiantsika amin'ny ankapobeny dia mametraka antsika amin'ny toe-tsaina tsara ary mety hahatonga antsika hihomehy be, ka ny tsiky sy ny hehy dia tsara.
Mitadiava grady toothy lehibe izay mampamirapiratra ny masony koa, ary fantatrao fa miaraka amina vintana ianao.
10. Mifandray aminao ny masony
Amin'ny kolontsaina tandrefana, amin'ny ankapobeny isika mahatsiravina tokoa raha mifandray amin'ny maso , Ka raha mifanena amin'ny mason'ny olona iray isika, dia fanahy iniana atao izany mazàna.
Mahagaga ny fifandraisana amin'ny maso, koa raha mifanena amin'ny masonao izy ary mitazona ny fijerinao dia famantarana tsara izany.
Inona koa, raha ianao hitanao fa mihalalaka ny mpianany rehefa miresaka aminao, dia famantarana bebe kokoa fa liana aminao izy.
11. Milelaka ny molony izy
Ny milelaka ny molotra dia famantarana tsy mahatsiaro tena fa tianao ny zavatra hitanao. Ary tsy miresaka fihetsiketsehana miloko amin'ny molotra be loatra momba ny filalaovana fatratra…
… Miresaka momba ireo lela kely lela kely toa bibilava ireo izay mandena ny molontsika amin'ny fahavonana hiteny na angamba hanoroka.
12. Blush izy
Indraindray ianao dia mety miteny na manao zavatra izay mahatonga ny takolany ho mavokely na mena mangirana aza. Ity blushing ity dia tsy misy ifandraisany amin'ny mahamenatra ary tsy misy ifandraisany amin'ny fientanam-po sy ny fitaintainanana.
Raha mifanadala aminy ianao ary mahita ireo tonon-jaky mena mamely ny takolany, dia famantarana izany fa mety manafina ny tena fahatsapana ho anao izy.
13. Mialoha tena
Raha tia anao ny tovovavy iray dia te ho tsara tarehy indrindra izy isaky ny misy anao. Noho izany dia hojereny ny volony, hikasika ny makiazy ary hanamboatra ny akanjony amin'ny toerana sahaza azy izy ireo.
Mety apetrany ao ambadiky ny sofiny ny volony rehefa miresaka ianao na mametaka gloss molotra mandritra ny fandroana trano fidiovana. Ireo famantarana ireo dia mety ho saro-pantarina, fa raha mandinika ianao dia ho hitanao.
14. Nivadika ho any aminao ny vatany
Rehefa tena liana amin'ny zavatra lazain'ny olona iray isika dia tsy mifantoka amin'izy ireo fotsiny amin'ny masontsika fa mitodika any aminy ny vatantsika iray manontolo.
Raha toa ka mitodika any aminao ny sorony, dia tena mifantoka aminao izy.Na izany aza, zava-dehibe ihany koa ny mijery ny tongony satria raha mijanona manondro anao ireo dia mety hisalasala izy handray anjara feno.
Hanana tenim-batana misokatra izay manasa sy mafana izy. Azo antoka fa tsy hiampita sandry izy. Mety hijoro somary lava kokoa koa izy ary hanosika ny sorony hiverina hampiharihary ny tendany.
15. Mihetsika kely kokoa izy
Raha misy tovovavy ao aminao, dia mety hiankina izy rehefa miresaka ianao, na handray antsasaky ny dingana mankany aminao mihitsy aza mba hifaneraseranao tanteraka aminao.
mbola velona ve i hulk hogan
Koa satria manosika mahomby ny fetran'ny habakao manokana izany dia zavatra akaiky izany. Nefa mampiseho fahalianana amin'ny zavatra lazainao sy ny haavony avo lenta fampiononana anao.
16. Mihifikifi-doha izy / na mampidina ny lohany
Ny zavatra hafa mety hataony nefa tsy tsapany akory dia ny manongilana kely ny lohany amin'ny lafiny iray rehefa miresaka ianao. Mampiseho fahalianana izany ary mampiseho fa mandray tsara izay lazainao izy.
Ity firongatry ny loha ity dia mety miaraka amin'ny fikororohana ny saokany mankany amin'ny tany. Ny valiny dia ny masony mitodika mankany amin'ny tavanao, mampihena ny tsipika ny valanoranony ary manome azy ny mason'ny alika kely alika.
Ity dia pose kely manaiky azy mampiseho marefo ary manintona ny toetran'ny lehilahy miaro.
17. Manome taratra ny fihetsikao sy ny fiteninao izy
Mazava ho azy fa isika olombelona dia maka tahaka izay ataon'ny hafa raha te-hitarika azy ireo isika. Mety ho eo amin'ny namana na eo amin'ny sehatry ny asa izany, saingy malaza indrindra amin'ny sary mampiaraka.
Ka raha hitanao ny fitaratra ny fihetsikao, ny fiteninao, na ireo zavatra nolazainao dia ny sainy tsy mahatsiaro tena no manintona anao.
18. Mahatsiaro ny zavatra nolazainao izy
Raha tiany ianao dia mety hihaino anao izy.
Raha nanonona ny anaran'ny alikan'ny nenitoanao ianao na ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny zandrinao lahy ary tsaroany izany dia porofo izany fa mihantona amin'ny teninao rehetra izy ary tena liana amin'ny zavatra lazainao azy fa tsy mivoaka.
Aza mitsara antsika mafy loatra amin'ity iray ity satria ny sasany amintsika dia manana fahatsiarovana mampihoron-koditra (olombelona ihany isika), fa raha mahatadidy zavatra kely nolazainao izy, mazava ho azy.
19. Hanontany anao izy
Tsy hoe hihaino izay lazainao fotsiny izy fa handavaka lalindalina kokoa mametraka fanontaniana aminao .
Te hahafantatra ny tena anao izy hanombanana raha misy ianao fitaovan'ny olon-tiana.
Miezaka izy mamantatra raha misy ny fifandraisana misy na tsia, koa miomàna amin'ny banter flirty izay mifantoka aminao indrindra.
Ary te-hahalala momba izay tombontsoa iraisana azonao zaraina sy momba ny taolam-paty miafina ao anaty lalimoanao ianao.
20. Mety hiresaka zavatra manokana sy akaiky kokoa izy
Angamba tsy avy hatrany, fa rehefa mifankahalala sy mahazo aina kokoa ianao miresaka zavatra, dia mety hitarika ny resaka amin'ny lohahevitra izay mampiseho haavon'ny fifandraisana akaiky na marefo ianao.
Mety ho ny nofinao, ny tahotrao, ny zavatra inoanao, ny safidinao momba ny ankizy, na koa ny ratram-po na ratram-po avy amin'ny fiainany taloha.
Ny zava-misy fa manokatra anao izy dia manambara fa mandray am-pahamatorana ity fifandraisana mamelana ity izy.
21. Manome anao ny fiheverany tsy mizarazara izy
Rehefa miresaka ianareo roa dia esoriny ny telefaoniny, tsy hiraharaha ireo fanelingelenana mandalo, ary hampifantoka ny heriny aminao.
Ity no fomba fampisehoany fa mampiasa vola amin'ny zavatra holazainao izy ary misy dikany aminy ny teninao.
Ary tsy hihaino valiny fotsiny izy toy ny ataon'ny olona maro amin'ny resaka sendrasendra, ho feno fieritreretana, haneho fahalianana, ary hahatonga anao hahatsapa fa henoina ny valinteniny.
22. Midera anao izy
Raha misy vehivavy te hanana anao hanana izany fahatsapana mafana sy mahafinaritra izany rehefa miaraka ianao dia mety hanome teny fiderana anao izy na hilaza zavatra mahafinaritra hafa momba anao.
ohatrinona ny vola ananan'i mr biby
Mety miresaka tsara momba ny anaovanao na lafin-javatra hafa amin'ny bika aman'endriny ianao. Na mety hanamarika ny zavatra nataonao izy izay nanaitra azy manokana.
Na inona na inona toe-javatra misy azy, raha milaza zavatra tsara momba anao izy, dia famantarana tsara fa tiany ho tianao izy.
23. Manondro na manambara fa mpitovo izy
Raha tsy mahalala tovovavy ianao ary vao nifankahita tamina fety na fisotroana na tamin'ny alàlan'ny namana dia mety manontany tena ianao hoe inona ny toetran'ny fifandraisany.
Fa raha liana aminao amin'io sehatra io izy aorian'ny fahafantarany anao kely, dia azo inoana fa hahita fomba hamelana azy hiala fa afaka sy tsy manambady izy ankehitriny.
Raha mitondra an'io izy dia iray amin'ireo famantarana matanjaka indrindra fa tiany ny zavatra hitany. Raha tsy nataony dia hisy antony kely hitondrana antsipiriany manokana toy izany.
Inona koa, izy dia hitandrina tsara ny fihetsikao hanombanana raha mpitovo ihany koa ianao ary inona ny fientanam-ponao momba azy.
24. Mikarakara zavatra iray eny an-tànany izy
Somary manahirana ity iray ity satria ny vehivavy mitazona zavatra eny am-pelatanany dia mety hidika zavatra hafa be mihitsy.
Ny lakilen'ny famaritana azy dia ny mijery ny fihazonany sy ny fifandraisany aminy. Savorony ve izy sa voafatiny mafy? Mifantoka be amin'ilay zavatra ve izy, sa mihetsika tsy mahatsiaro tena ny tanany?
Raha misotro zava-pisotro izy, ohatra, ary manetsiketsika moramora azy io mandritra ny fihazonana ny fifandraisanao amin'ny masonao, dia azo inoana kokoa ho famantarana izany fa milamina izy ary misokatra ho anao amin'ny maha olona anao.
Raha toa ka mamihina ny kitapony eo afovoany izy ary mijery lavitra anao, dia miezaka mitazona sakana ara-batana eo aminao sy izy izy satria tsy liana, na satria mbola tsy mahazo aina tsara ao aminao izy. fanatrehana.
maninona aho no mamoy ny tenako
25. Ao anaty antsipiriany daholo izany
Be dia be ny fotoana, ny ankizivavy dia tena mifantoka amin'ny antsipiriany.
Fihetsiketsehana lehibe sy miharihary no misy ny toerany (tsy hitaraina velively isika raha misy bandy manasa anay any Paris amin'ny fiatoana kely…), fa rehefa misy tovovavy te-hampiseho fa tiany ny olona iray, dia handalo ilay izy antsipiriany fa tsy zavatra lehibe.
Mety mahandro sakafo hariva anao izy, mety hividy zavatra kely sy adaladala aminao izy mety hanao zavatra mieritreritra amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahanao…
Raha manao zavatra mitaky fampiasam-bola fa tsy vola izy dia azo antoka fa ao aminao izy ary manandrana mampiseho azy.
Mitadiava famantarana famantarana miverimberina
Ny mahatsikaritra maro amin'ireo famantarana ireo dia miharihary fa tena manampy rehefa manandrana mamantatra raha toa ny ankizivavy iray tia anao mihoatra noho ny namana fotsiny, fa mihamazava hatrany ny sary arakaraka ny ahitanao ireo zavatra miverimberina ireo.
Amin'ny fitokana-monina, ireo famantarana ireo dia azo adika amin'ny fomba diso kokoa noho izy ireo. Saingy isaky ny mahita azy ireo ianao dia afaka mitombo ny fahatokisanao momba ny tena fahatsapany anao.
Toy ny lamosiny?
Raha manome anao ny signal rehetra mety izy dia mila mamaly ianao mba hahazoana antoka fa fantany fa tsy irery izy amin'izany. Hijery akaiky anao izy amin'ny famantarana, tahaka anao.
Kitiho izy, mitsikia, ihomehezana ny vazivazy, ary - tena zava-dehibe izany - lazao azy fa tianao izy (tsy dia sadaikatra ianao) <<– click this link to learn how best to do this.
Tsy misy vonona hisoratra anarana fitiavana tsy misy valiny , ary na dia manomboka tiany anao aza izy dia tena mila fampaherezana alohan'ny hamelany azy hianjera.
Ankafizo ny lolo.
Raha resy lahatra ianao fa tia anao ity zazavavy ity, saingy tsy azonao antoka izay hatao manaraka, maninona raha mifampiresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fiarahana amin'ny Heroes de la Relation? Tsotra.
Rahoviana no fotoana mety hitenenana hoe 'tiako ianao' amin'ny fifandraisana?
Famantarana 12 hampiarahanao amin'ny lehilahy lahy Beta (Ary nahoana izany no zavatra tsara)
Ny torolàlana ho an'ny mampiaraka ara-tsosialy
Fanontaniana 10 momba ny fifandraisana tokony ho apetrakao alohan'ny zava-dehibe
Ahoana no ahalalanao raha mifankatia ianao? 10 Famantarana tsy azo lavina fa tena izy.
dx vs rahalahin'ny fandringanana
ny fomba hampiatoana ny fiankinan-doha amin'ny vadiko
manan-janaka ve ny lefona britney?
ny fomba hikarakarana ny tenanao ara-pientanam-po
zavatra tsara hatao rehefa leo
ny fomba filalaovana mafy hahazoana lehilahy
inona ny karazana toetra tsy mahay mandalo